I-3 Bungalow yentengiso iyathengiswa eGloucester, eGloucestershire
Real Estate Listings: » Residential homes » Bungalows » GB » Gloucestershire » Gloucester » I-3 Bungalow yentengiso iyathengiswa eGloucester, eGloucestershire1
United Kingdom, Gloucestershire, Gloucester, Gl2 9dd
Ikhowudi yeposi: Gl2 9dd
Iimbonakalo: Three double bedrooms, Semi detached, Private rear garden, Presented beautifully, Newly fittted bathroom, Off road parking, EPC: Tba
IBongalow ehonjiswe kakuhle, ibekwe kwindawo edumileyo yeOxstalls Drive.Ipropathi inamagumbi okulala amathathu alungileyo, elinye lisetyenziswa njengegumbi lokutyela, indawo yokugcina izinto, ikhitshi elibanzi, igumbi lokuhlambela elisanda kulungiswa, kunye negumbi lokuphumla elinomtsalane ifestile ebheke ngaphambili.Ngaphandle ipropathi inikezela ngegadi yabucala ethandekayo, izitena ezakhiweyo kunye nendawo yokupaka.Iinkcukacha ezilindele ukuvunywa kwabathengisi.IntranceEntrance nge-UPVC kabini emenyezelwe phambi komnyango.Intrance HallStorage khabhathi, ukufikelela kwephahla kunye neengcango zekhitshi, kwigumbi lokuhlala, igumbi lokutyela, igumbi lokuhlambela kunye negumbi lokulala lonke. Igumbi lokuhlala (10'08 x 14'05 (3.25mx 4.39m)) I-UPVC iphindwe kabini ngaphandle komfanekiso. Indawo yeradiyo kunye nomabonwakude.Igumbi lokutyela (10'09 x 7'09 (3.28mx 2.36m)) I-UPVC iphindwe kabini yatyibilika iminyango etyibilanayo yepatio ukuya kwigumbi lokugcina. Is radiator.Conservatory (9'00 x 8'10 (2.74mx 2.69m)) I-UPVC iphindwe kabini emenyezelweni kuyo yonke imiba, kunye neengcango zepatio kabini ezikhokelela egadini. Umgangatho wamanzi amdaka kunye nesitena.Kitchen (7'04 x 13'00 (2.24mx 3.96m)) I-UPVC iphazili kabini ngefestile kunye nomnyango wepatio ecaleni kwecala. Uluhlu lwenqanaba lesiseko kunye nodonga oluxhonywe kudonga ngomgangatho womsebenzi ongaphezulu. Iyunithi enye enesiqingatha yesityu engazinzanga yentsimbi enetephu yokuxuba. Ukufumba ngemibhobho yoomatshini wokuhlamba kunye nesitya kwisitya esingaphezulu kwifriji. Yakhelwe kwi-oveni yombane kunye ne-hob ye-hob ene-hoodor yeoder ngaphezulu. Inxalenye yeetayile zodonga kunye nokuthanda. I-Bedroom One (10'07 x 9'11 (3.23mx 3.02m)) ye-UPVC kabini ekhanyisiweyo iwindow yokubuyela umva, irediyeyitha kwaye yakhiwe kwiiwadi zobungqina.Bedroom yesibini (9'10 x 10'05 (3.00mx I-3.18m)) I-UPVC iphindwe kabini ngefestile ekhangelwe ngaphambili, irediyetha kunye naphantsi komgangatho.Bathroom / Shower Igumbi (7'04 x 5''11 (2.24mx 1.52m)) I-UPVC iphindwe kabini yewindows efayilishwe icala ukuya kwicala elisecaleni, kumgangatho we-lino, kunye Ubushushu besitayile seChris. Isitya sokuhlamba izandla ngesitya kunye nompompu wokuxuba ngaphezulu, amanqanaba asezantsi eWC, kunye ne-cubicle yegumbi lokuhlambela. Inxalenye yeetayile zodonga kunye ne-fanor yomatshini.Okuphambi kwePropatiIeNdlela yokupaka indlela.Ukuvalwa kwePropathiIyabekwa ngotshani kwindawo enomhlaba, kunye nezihlahla. Ukufikelela kwicala kunye nezitena ezakhelweyo.Date Iinkcukacha zenziwe: 9.11.19Freehold.Idrafti elindele ukuvunywa ngumthengisi.Idilesi yokusebenza kwesatifikethiA ikopi yesiqinisekiso sokusebenza kwamandla iyafumaneka ngesicelo.Zaziso: Ukuba umnikelo wakho wamkelwe.Ngokuhanjiswa kweMali. Imigaqo 2007 sinoxanduva lokuqhuba ngenkuthalo kubo bonke abathengi bethu ukuqinisekisa ubuchwephesha babo. Endaweni yeendlela zesiko apho kuya kufuneka uvelise amatyala asetyenziswayo kunye ne-id yefoto sisebenzisa inkqubo yokuqinisekisa ngombane. Le nkqubo isivumela ukuba sikuqinisekise ngokusuka kwiinkcukacha ezisisiseko usebenzisa idatha ye-elektroniki, nangona kunjalo ayisiyiyo ikhredithi yokuthenga ngetyala ngalo naluphi na uhlobo ayizukubanefuthe kuwe okanye kwimbali yakho yamatyala. Uyaqonda ukuba siza kwenza uphando kunye namava ngenjongo yokuqinisekisa ukuba ungubani na. Ukwenza oku amava angakhangela iinkcukacha ozibonelela ngokuchasene nayo nayiphi na inkcukacha nakweyiphi na inkcukacha (yoluntu okanye enye into) abanokufikelela kuyo. Banokusebenzisa iinkcukacha zakho kwixa elizayo ukunceda ezinye iinkampani ngeenjongo zokuqinisekisa. Ingxelo egciniweyo yokukhangela iya kugcinwa.Umthengisi oyintloko-Isaziso sesimangalo: Izixhobo ezinje ngeeradiyetha, ii-hitha, ii-boilers, izilungiso okanye izinto ezisetyenzisiweyo (igesi, amanzi, umbane) ekusenokwenzeka ukuba zichaziwe kwezi zinkcukacha azikavavanywa kwaye akukho siqinisekiso banikwe ukuba bafanelekile okanye bayasebenza ngokulandelelana. Asinakuqinisekisa ukuba imigaqo yolwakhiwo okanye imvume yokucwangcisa ivunyiwe kwaye singacebisa ukuba abo baza kuba ngabathengi kufuneka benze ezabo imibuzo ezizimeleyo ngale micimbi. Yonke imilinganiselo ichanekile.Izaziso zokugcina-amaxwebhu abameli: Nceda uqaphele ukuba kulandela ukungeniswa kweNtlawulo yeNtlawulo yokuQesha ngomhla woku-1 kweyeSilimela ka-2019, uninzi lweefizi ezazibhatelwe ngaphambili ngabaqeshi ngoku ziyekisiwe. Nangona kunjalo, ezinye iindleko zisasele. Iinkcukacha ezithe kratya zingafumaneka apha
Nxibelelana nentengiso 0145275xxxx
, Gl2 9dd
Izikolo ezikufutshane Gl2 9dd